UFil Mickelson uphuma emoyeni ngokubhiyozela emva kokuphumelela kwe-putt kuma-Masters ka-2004. Andrew Redington / Getty Izithombe
"Ngaba Phil uya kuphumelela?" i-chorus yayikhula iminyaka emininzi. UPhil Mickelson uzuze amaxesha amaninzi kwi- PGA Tour , kodwa wayengeke anqobe iqela lobungcali. Wayeza kufutshane namaxesha ambalwa, kodwa akazange angene uphawu lo mbandela.
Kuze kube ngo-2004 kwi-Masters, xa uMickelson ekugqibeleni waphumelela kobuqili bokuqala.
Wenza ngendlela efanelekileyo, kwakhona, okwenza i-birdies kwiintlanu ezisixhenxe zokugqibela zomqhudelwano. Iibrodi zokuqala ezine zamfaka emqotsheni kunye no-Ernie Els, owayengumkhuba wokubeka eluhlaza, ulindele ukukhwabanisa, xa uMickelson ekhutshwe kwi-72 hole.
Indlela kaMickelson yayilungile, ibhola yakhe ihlala kwiinyawo ezili-18. I-downt layt yehlise indlela eya ngasemngxeni, yaza yangena. UMickelson waxhuma emoyeni, iingalo zaphakanyiswa, imilenze i-akimbo, ukubukeka kwimihlali ebusweni bakhe. Wandula wathi, "Ndenze!" yakhe.
Wenza oko, ngokwenene: uPhil Mickelson ekugqibeleni waba ngumqhubi omkhulu weqhawe.
I-Top 5 kuma-Masters ka-2004
UKJ Choi, 71-70-72-69--282
UBernhard Langer, 71-73-69-72--285
USergio Garcia, 72-72-75-66--285
2005 IPGA Championship
UDoug Pensinger / Getty Izithombe
Inkolelo enkulu uNombolo 2 kaPhil Mickelson weza eNew Jersey eBaltusrol Golf Club. Kodwa kwafuneka ahlale usuku olongezelelweyo eJersey ukuze alondoloze ukunqoba.
Imvula yaphazamisa umjikelezo wokugqibela ngeCawa, ukunyanzelisa ukulibaziseka kwexesha elide kwaye ekugqibeleni kubangele ukumiswa komdlalo. Xa umdlalo wawubizwa ngokuba ngumhla, i-Tiger Woods yayiyinkokheli yeclubhouse kwi-2-phantsi. Kodwa abadlali abathandathu bebesesesikolweni, kuquka uPhil Mickelson, owayengumholi kwi-4-ngaphantsi.
NgoMvulo, emva kokuphinda kuqhutywe umdlalo, uMickelson uphonsa udumo waza wangena kunye noTomas Bjorn noStephen Elkington. U-Mickelson wakhankanya umqhubi emgodini wokugqibela kwaye ibhola yakhe yahlala isondele kakhulu kwi-plaque kwi-fairway ekhunjulwa ngotshongo oluthatyathwa nguJack Nicklaus ngexesha likaNicklaus ngo-1967 US Ulolo oluvulekileyo eBaltusrol.
UMickelson wahamba waya e-plaque, wayiphonsa kunye neklabhu yakhe, wahamba waya ku-green-par-5 ezimbini. I-woodway yakhe yayingabikho nto eluhlaza, kunokuba ifumene ubunzima obukhulu. Kodwa uMickelson umlumbi wagubha ibhola ngaphakathi kwinqanaba elincinci lomngxuma, wenza i-putt ye-birdie, wayinqoba umdlalo.
I-Top 5 kwi-PGA Championship ka-2005
UTomas Bjorn, 71-71-63-72--277
UDavis Love III, 68-68-68-74--278
Isimo se-2005, iTiger Woods, sibeka iGreen Jacket kuPhil Mickelson. UDavid Cannon / Getty Images
Inkqubela yesithathu ye-Phil Mickelson yinto yokuphumelela kwinqanaba lobungqina beyesibini kwi-Masters.
Le nto yayingumncinci omncinci ngaphezu kokuqala, nangona kungabi lula. Ukunqoba okubini kwinqanaba elincinci kusondele, kwaye uMickelson wenza phantsi koxinzelelo kulo lonke ujikelezo.
Wayexoshwa liqela elihle, kwakhona: Inkokheli ye-Second-round Chad Campbell; UFred Couples, odlala noMickelson kwinqanaba lokugqibela, aba babini bebenobungakanani bemihla ngemihla; Tiger Woods, owadutshulwa kuma-69 kuMickelson angama-69 kwinqanaba lokugqibela waza wagqiba ukubopha wesithathu.
Umgijimi walo nyaka nguTim Clark, owathi wagqiba izibetha ezimbini emva kukaMickelson. Kodwa umgodi ophumayo kwi-72 hole u-Clark wamenza ukuba avele ngakumbi kumxube kunokuba wayekufutshane ekuhambeni kwexesha.
Ku-Mickelson, ukuphumelela kwesi sihloko kunokwenziwa kwinto encinci nje yokuba imbambano yakhe uBolds kwafuneka iphoqe iGreen Jacket kumagxa kaMickelson kwimigubho yokunikezelwa kwembasa.
I-Top 5 kwi-Masters ka-2006
UTim Clark, 70-72-72-69--283
Abazalwana bakaFred, 71-70-72-71--284
Tiger Wood, 72-71-71-70--284
UJose Maria Olazabal, 76-71-71-66--284
( Amanqaku apheleleyo )
UPhilip Mickelson uyabhiyozela emva kokucima i-putt yokugqibela kwi-72 yama-Masters ka-2010. UDavid Cannon / Getty Images
Ixesha le-2010 livule ngesithembiso esikhulu kuPhil Mickelson, owaphelisa ixesha le-2009 ngempumelelo enkulu kwi-Tour Championship kunye ne-WGC HSBC Championships eChina. Kwakulindeleke ukuba athathe ngaphaya kwaloo mpu meko ka-2010.
Kodwa ayizange iqale ngale ndlela. UMickelson wavula u-2010 ngokukhawuleza, kwaye waya eMasters abaninzi ababukeli begalufu bebuza ukuba kwenzekani na Phil. Impendulo: Akukho nto.
Ukusebenzisa amathuba ahlukeneyo kunye namathuba amakhulu okubuyiswa kwi-Club yase-Augusta yeGolf, kunye nokuthembela kumdlalo wakhe omncinci kunye neveki enhle kwimifuno, uMickelson wanqoba iMasters ka-2010 ngamathathu ngo-Lee Westwood.
Izinto ezimbini ziveze ngokuphumelela kukaMickelson. Enye yoluhlu lwesithathu emhadeni wesithathu, imingxuma ye-13 ukuya kwe-15, apho uMickelson eya khona ukhozi-ukhozi-birdie. Okwesibini yindlela eya kwi-5 ka-13 ukuba uMickelson wadlala kwindawo yokugqibela. Ngaphandle kwemithi, kunye ne-pine straw, uMickelson ngandlela-thile wayifumana ibhola ngaphakathi kweenyawo ezininzi kwendebe. Wayikhumbula u-ukhozi wafaka, kodwa wenza i-birdie waza waya ekuphumeleleni.
U-Mickelson naye wadlala kuyo yonke into ehambelana nokubuya kukaGiger Woods kwigalufu kule Masters, ngaphezu kokujongana neemvakalelo zokuba nomfazi kunye nonina abafumana unyango lomhlaza. Ukuphumelela okukhulu kuPhil, ukuqinisekisa ukuba sesithathu kwiMasters kunye neyesine sayo yonke.
I-Top 5 kuma-Masters ka-2010
U-Lee Westwood, 67-69-68-71--275
U-Anthony Kim, 68-70-73-65--276
UKJ Choi, 67-71-70-69--277
2013 iBritish Open
UFil Mickelson uphakamisa iingalo zakhe ngokunqoba emva kokucima ibhasi ye-birdie kwi-green yonyaka ngo-2013 eBritish Open. Andy Lyons / Getty Izithombe
U-Phil Mickelson uzuze phambili kwixesha le-PGA Tour, kwaye, eneneni, waphumelela ngeveki ngaphambi kwe- 2013 eBritish Open kwi- Open Tour yase-Scottish yase-Scottish. Ukuba iScottish Open win kwaba nguMickelson owokuqala kwiinkqubo zegalufa.
Ingaba loo mqondiso ingathi uMickelson wayeyindoda yokubetha kwi-Open Championship? Njengoko kuvela, akukho namnye owabetha uMickelson, kwaye uLepty uzuze iBrazil yakhe yokuqala, iqela lakhe lesihlanu elincinci.
Ingxelo yomzila kaMickelson kwi-Open phambi koku akuzange kulungile. Wayephosa ukusikwa ngo-2012, kwaye ngaphezu kobunzima bakhe babenokuphindwa kabili kwiBritish Open njengoko i-Top 10 iphelile. Ngona nangona wangena kulo mqhudelwano ekuphumeleleni, ukunqoba kukaMickelson apha kwakungalindelekanga.
Wayifumana ngokudubula ama-66 kwinqanaba lokugqibela, eboshwe kwinqanaba elincinci lomqhudelwano. UMickelson waqala ujikelezo lokugqibela oluboshwe kwindawo yesithoba, iintlanu ezintshontsho emva kwenkokeli, uLee Westwood.
Kodwa ngomgca wesi-14 wekota yokugqibela, uMickelson ufikelele-1-ngaphantsi, wafutshane ngokukhawuleza wangena kwisikhokelo sokukhokela ngeWestwood no-Adam Scott, ngoko wathatha ngokukhokela ngokucacileyo njengoko iWestwood neScott yahlaselwa. UMickelson wagqiba nge-birdies kwiimingxuma ze-17 kunye ne-18 ukuphumelela ngemivimbo emithathu.
I-5 ephezulu kwi-2013 Open Championship
UHenrik Stenson, 70-70-74-70--284
UAdam Scott, 71-72-70-72--285
U-Lee Westwood, u-72-68-70-75-285